DHEGEYSO-Beelo lagu heshiisiinayo bariga gobolka Galgaduud. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Beelo lagu heshiisiinayo bariga gobolka Galgaduud.
Agoosto 10, 2016 11:28 g 0
Caabudwaaq, Wararka ka imaanaya deegaanka Xiim-Cadde oo hoosyimaada degmada Ceel-buur ee Bariga gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ka socoto waanwaanta beelo dhowaan colaadi deegaamadaasi kudhexmartay.
Nabadoon Cumar Cabdulle oo kusugan Xiim-cadde ayaa waraysi uu siiiyey Radio Daljir kusheegay in deegaanka ay gaareen duubab dhaqan iyo ciidamo katirsan maleyshiyaadka Alshabaab kuwaasi oo beelaha dhexdhexaadin kadhex wada, Cumar Laki man ayaa waraystay.
DHEGEYSO-Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay Alshababka lagu qabtay koonfurta Galkacyo.